बीमा कम्पनी थपिएर व्यवसायमा असर पर्दैन – Banking Khabar
बीमा कम्पनी थपिएर व्यवसायमा असर पर्दैन
बीमाको सुरुवात भएको लामो समय भइसक्दा पनि नेपालमा बीमाको पहुँच विस्तार हुन सकिरहेको छैन । जोखिम परेको अन्तिम अवस्थामा मात्रै बीमाको आवश्यकता महशूस गर्ने र जोखिम कम हुनेवित्तीकै विर्सिने नेपालीहरुको प्रवृत्तिका कारण बीमाको पहुँच विस्तार हुन नसकेको युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका का.मु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश कुमार भट्टराई बताउँछन् । बीमाको पहुँच विस्तार हुन नसक्नुमा कम्पनीहरुको भन्दा पनि सर्वसाधारणको नै कमजोरी रहेको उनको भनाई छ । हेरौँ, उनै भट्टराईसँग बैंकिङ खबर डट कमका लागि सहकर्मी विजय पराजुलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा इन्स्योरेन्स भनेको के हो, बताइदिनुस न ?
सामान्य भाषामा बीमा भनेको जोखिमलाई स्थान्तरण वा सार्नु हो । कुनै चिज वा वस्तुमा जोखिम धेरै देखियो भने त्यो जोखिम बीमा कम्पनीमा सार्ने काम नै जनरल इन्स्योरेन्सको हो । त्यो जोखिम सारे बापत केही रकम बीमा कम्पनीले लिन्छ । जोखिमको प्रकार र बीमा गरिएको अवधिका आधारमा जोखिमबाट भएको क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले गर्छ । बीमामा दुई पक्ष हुन्छ । प्रथम पक्षले म तपाईहरुको यो समयदेखि यो समयसम्म, यस्तो यस्तो खालको जोखिम भयो भने बहन गर्छु भनेर एउटा प्रपोजल दिएको हुन्छ । द्धितीय पक्षले ती जोखिमहरुलाई हस्तान्तरण गर्छ । कतिपय जोखिमहरु देखिने हुन्छन् भने कतिपय जोखिमहरु नदेखिने खालका हुन्छन् । कतिपय जोखिमहरुलाई आफ्नै फिजिकल रुपले घटाउन सकिन्छ । तर, जति घटाए पनि कतिपय जोखिमहरु घट्दैनन् । ती आफुले घटाउन नसकेको जोखिमहरु इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । जोखिमलाई पूर्ण रुपमा निर्मूल पार्न नसकेपनि बीमा कम्पनीले केही हदसम्म जोखिम कम गर्न मद्दत गर्छन् ।
पछिल्लो समयमा इन्स्योरेन्सहरुको संख्या बढिरहेको छ । इन्स्योरेन्सहरुको संख्या बढ्दा प्रतिष्पर्धामा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
जति इन्स्योरेन्सहरुको संख्या बढेतापनि विजनेसको आकार त्यही नै हुन्छ । पहिलाको भन्दा विजनेसको आकार अहिले बढेको छ । गत वर्षको भन्दा अहिलेको विजनेस १६ प्रतिशतले बृद्धि हुँदै आएको छ । अब २०७५/७६ मा पनि विजनेसको आकार १५ प्रतिशत देखि १८ प्रतिशतसम्म मात्रै बढ्छ । हाल निर्जिवन बीमा कम्पनिहरु २० वटा पुगेका छन् । अबका दिनमा नयाँ सिटी तथा उद्योगधन्दाहरुको विकास हुने हुँदा कारोबार बढ्दै जान्छ ।
बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको छ । तर, पुँजी बढ्दैमा विजनेस बढ्ने हुँदैन । सबै बीमा कम्पनीहरुलाई कति विजनेसको फिगरमा बस्ने भन्ने कुरामा चुनौती छ । एक अर्ब पुँजी पुग्दा विजनेसको साइज कतिमा राख्ने भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हुन्छ । विजनेस साइज कम लिएर बसेका तर एक अर्ब पुर्याइसकेका कम्पनीलाई अफिस चलाउन गाह्रो हुन्छ । ५०।६० करोडको प्रिमियम त कर्मचारी पाल्नलाई मात्र ठिक हुन्छ । त्यसैले बीमा कम्पनीहरुले पुँजी बढाएसँगै विजनेस पनि विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ ।
नेपालमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न के गर्नुपर्छ ?
बीमाको पहुँच नेपालको सन्दर्भमा कम नै छ । यसमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण भनेको जनचेतना हो । सर्वसाधारणहरुले बीमा भन्ने कुरा बाहिरी रुपबाट बुझेका छन् । तर बीमा गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने चेतनाको अभाव भइरहेको छ । यसकारण सर्वसाधरणहरुलाई बीमा महत्वको ज्ञानमा कमी भएर सबै मानिसहरु बीमा पहुँचमा पुग्न नसकेका हुन् ।
त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरुमा आबद्ध भएका कर्मचारीहरुमा पनि बीमा ज्ञानको अभाव छ । उनीहरुलाई बीमा भनेको मात्र थाहा छ । मानिसहरुलाई बीमा गर्दाको फाइदाको बारेमा सर्वसाधरणहरुलाई बुझाएर भन्न सक्ने क्षमताको पनि कमी भएको कारण बीमा पहुँच कम भएको हो । त्यसकारण बीमा क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी राम्रो ज्ञाना भएको मानिसले जनचेतना फैलाउने खालको विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
व्यवसाय विस्तारका लागि बैंक र इन्स्योरेन्स बीच विभिन्न सम्झौता हुने गरेको छ । बैंक र बीमाबिचको सम्बन्ध के होला ?
बैंक र इन्स्योरेन्स एक अर्कोका अन्तरसम्बन्धित पाटो हुन् । कुनै ठाउँमा शाखा खोल्नुपर्यो भने बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न अध्ययन गर्छन् । त्यस ठाउँमा व्यवसाय राम्रोसँग चल्छ कि चल्दैन ? कति विजनेस हुन्छ वा हुदैन ? यो सबै विषयमा अध्ययन गर्ने मापदण्ड भनेको नै बैंक हो । त्यस ठाउँमा कति वटा बैंकहरु छन्, फाइनान्स कम्पनीहरु कति वटा छन्, तीनीहरुले अहिलेसम्म कति लोन दिए, कस्तो कस्तो लोन दिए, यो सबै कुराको लेखाजोखा बेंकबाट लिइन्छ । यसकारण इन्स्योरेन्स कम्पनिहरुलाई बैंकको आवश्यकता छ । त्यसैगरि बैंकका लागि पनि इन्स्योरेन्स एकदम महत्वपुर्ण छ । किनभने इन्स्योरेन्स नगरेको प्रोपर्टिलाई बैंकले लोन दिँदैन वा बैंकले त्यस्तो इन्स्योरेन्स नगरेको सम्पत्तिको धितो राख्दैन । बैंकलाई चाहिने पोलीसीहरु इन्स्योरेन्सहरुले बनाउने हुनाले बैंकको लागि इन्स्योरेन्सको महत्व धेरै छ ।
नेपालमा भुकम्प जस्तो प्राकृतिक प्रकोप जाँदा पनि धेरै बीमा भएको पाइएन । बीमा कम्पनीहरुले आम नागरिकहरुलाई बीमा बारे बुझाउनै नसकेका हुन् त ?
बीमा कम्पनीहरुले बीमाको महत्वलाई बुझाउन नसकेका हैनन्, बुझाउन सक्छन् । तर नेपाली समुदायमा विपद आइसकेपछि मात्रै सतर्क हुने प्रचलन छ । जस्तै, भुकम्पको समयमा त्रसित भएर मानिसहरु इन्स्योरेन्स कम्पनी धाइरहेका थिए । तर, जब त्यो त्रास कम हुँदै गयो, नागरिकहरुले पनि बीमा गर्नुपर्ने कुरा विर्सँदै गएका छन् । भुकम्प गएको समयमा जसरी अहिले आम नागरिकहरुले बीमाबारे चासो देखाएका छैनन् । आम जनताहरुले जोखिम जहिले पनि जति बेला पनि हुन सक्छ भन्ने कुरालाई बिर्सिएका छन् । त्यसैले, यहाँ बीमा कम्पनीहरुको भन्दा बढी सर्वसाधारणहरुकै कमजोरी छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
युनाइटेड इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजीको अवस्था कस्तो छ ? मर्जरमा जाने नीति ल्याउने अवस्था के छ ?
युनाइटेड इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी अहिले ३० करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद सेयर जारी गरेर एक अर्ब पुँजी पुर्याउने हाम्रो योजना छ । ४/५ बर्ष पछिको सिनारियो हेर्ने हो भने कोसँगको गाभिने र लिड कसले गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । त्यस्तै, विजनेस कुन फिगरको साइजबाट बस्ने भन्ने कुरा पनि महत्वपुर्ण हुन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा सबै बीमा कम्पनीहरुलाई इगो छ । कुनै पनि बीमा कम्पनीहरु मर्जमा जाने अवस्था आएको छैन । तर, कुनै कम्पनी हामीमा मर्जरमा आउँछन् भने पनि हामी खुला छौँ । साथै, कुनै विदेशी कम्पनी पार्टनरको रुपमा आउँछन् भने पनि हामी खुला छौँ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न युनाइटेड इन्स्योरेन्सले कस्तो योजना बनाएको छ ?
पछिल्लो दिनहरुमा बीमा कम्पनीहरुले शाखा विस्तार कार्यलाई आक्रामक ढंगले अगाडी बढाउँदै आएका छन् । सबै बीमा कम्पनीहरुले सात वटै प्रदेशमा शाखा विस्तार तीव्र रुपमा गरेका छन् । साथै ७ वटै प्रदेशमा १।१ वटा रिजनल अफिस राख्ने काम पनि सुरु गरेका छन् । सबै प्रदेशमा रिजनल अफिस भएपछि विजनेस फिगर पनि बढी नै हुन्छ । एउटा प्रदेशमा एउटा रिजनल अफिस भएपछि त्यो रिजनलले गाउँ गाउँमा प्रचार प्रसार नगर्ने भन्ने हुँदैन । बीमा पहुँच विस्तार गर्नका लागि बीमा कम्पनीहरुले गाउँ गाउँमा जनचेतना फैलाउने विभिन्न कार्यक्रमहरु राखेका छन् ।
युनाइटेड इन्स्योरेन्सको बीमा योजनाहरु के के छन् ?
अन्य बीमा कम्पनीहरुले जारी गरेको सबै पोलीसिहरु युनाइटेड इन्स्योरेन्सले पनि जारी गरेको छ । सामुन्द्रीक बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सम्पति बीमा, अग्नी बीमा, मोटर बीमा लगायतका पोलीसीहरु युनाइटेडले जारी गरेको छ ।
इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी ढिलो गर्छन् भन्ने गुनासो आउने गरेको छ । भुक्तानी ढिलो हुनुको कारण के हो ?
सकेसम्म इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी दिन ढिला गर्दैनन् । दाबी भुक्तानीका लागि बीमा कम्पनीले जति ढिला गर्छन्, उती नै उनीहरुलाई घाटा हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी दिएन भने सिधै संख्या घटेको हुँदैन । त्यस कम्पनीको आउटस्डान्डीङ क्लेम राख्दा इन्स्योरेन्स कम्पनीले त्यसलाई प्रोभिजन राख्नुपर्छ । प्रोभिजन राख्नु भनेको कम्पनीको प्रोफिटबाट रकम घट्नु हो । अबको विजनेस भनेको क्लेम बेस विजनेस हो । क्लेम जुन बीमा कम्पनीले दिन्छ, त्यसमा नै बीमा गर्न सर्वसाधारणहरु आतुर हुन्छन् । क्लेम नै दिएन भने बजारबाट ग्राहक उठाउँछु भन्नु एउटा भ्रम मात्रै हो ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहानुहुन्छ कि ?
नेपालको बीमा क्षेत्र खराब पनि छैन । अहिले नेपालमा बीमाको बजार सानो छ । तर, विदेशी मल्टिनेशनल कम्पनीहरु नेपाल आउन इच्छुक छन् । बीमा कम्पनीहरुको बजारलाई फराकिलो बनाउनका लागि बीमा कम्पनीहरु सक्षम भएर अगाडी बढ्नुपर्छ । बीग मर्जरमा गएर कम्पनीहरुलाई सबल बनाउनुपर्छ ।
कैलाश विकास बैंक पनि मर्जरमा जाने सोचमा
धमाधम ऋणपत्र जारी गर्दै वाणिज्य बैंकहरु : दुई वटाको खुला, दुईको आउँदै
इस्टर्न हाइड्रोपावरले साढे १५ लाख कित्ता आईपिओ निष्काशन गर्ने
पोखरा फाइनान्सको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
सेयर बजारमा दोहोरो अंकको वृद्धि
कास्कीको घान्द्रुकमा ज्योती विकास बैंकको नयाँ शाखा
ग्रामीण स्वावलम्बन कोषमा लगानीको अवस्था कस्तो छ ?
लगानीकर्ताको रिले अनसन : थपियो तीन माग
गणपति माइक्रोफाइनान्सको दोस्रो वार्षिकोत्सव : ४५ वृद्धवृद्धालाई सहयोग
एनआईसी एशिया बैंकको डेपुटी सिइओमा सुुधिरनाथ पाण्डे नियुक्त
कृषि क्षेत्रमा विकास बैंकको उत्साहजनक लगानी
प्रस्तावित बिमा विधेयकको २१ बुँदामा संशोधन माग